Study in Australia from Nepal | whether you should go or not? | Real Story
Study in Australia from Nepal | Real Fact story | whether you should go or not?
Study in Australia from Nepal : १२ पनि सकियो अब के गर्ने ? नेपालमा पढेर त्यही हो, Bachelor, Masters सक्कायो, तलब २० हजार भन्दा हुँदैन । बरु अहिले नै विदेश जान्छु, ४-५ बर्ष मिहिनेत गर्ने गर्छु, कमाउछु, पैसा घरमा पठाउछु अनि त्यतै PR लिएर बस्छु ।
नेपालमा प्लस टु पास गरिसकेपछि धेरै विद्यार्थीको दिमागमा आउने कुरा हो यो । अघिल्लो बर्षमात्रै ६२ हजार नेपालीले बिदेश गएर पढ्ने अनुमति लिएका थिए । ती मध्ये पनि ३३ हजार विद्यार्थी त अस्ट्रेलिया जाने मात्रै थिए ।
आखिर के छ अस्ट्रेलियामा, जसले गर्दा सबै विद्यार्थी त्यहीँ जान खोजिरहेका हुन्छन् ? के साच्चै तपाइँले सोचेजस्तै छ अस्ट्रेलिया ? आउनुहोस् थोरै यसबारे बुझ्ने कोशिस गरौं है !
नेपाल को पढाई र अस्ट्रेलियाको पढाईमा के फरक छ ?
नेपालको पढाईको मान्यता नेपालमा मात्र हुन्छ भने अस्ट्रेलियाको पढाईको मान्यता विश्वभरि नै हुन्छ ।
नेपालीहरु अस्ट्रेलिया पढ्न नै जान्छन् कि पैसा कमाउन ?
तपाइँले अस्ट्रेलिया जान लागेका १० जना विद्यार्थीलाई यो प्रश्न सोध्नुभयो भने 8 जनाले पैसा कमाउन जाने हो भन्ने जवाफ दिने छन् । किनकी साच्चिकै पढ्न चाहाने नेपाली विद्यार्थी कि अमेरिका जान्छन्, कि India जान्छन् कि त नेपालमै मिहिनेत गरेर पढ्छन् । त्यसैले कमाउनको लागि IELTS गरेर जाने ठाउँ अस्ट्रेलिया हो भने IELTS नगरि जाने ठाउँ कतार, मलेसिया हो भन्दा पनि खासै फरक पर्दैन !
पैसा नहुनेले पैसा खोजेर अस्ट्रेलिया जाने कि नजाने ?
अस्ट्रेलिया एउटा ठुलो सपनाको देश हो । जहाँ लाखौ मानिस आफ्नो सपना पुरा गर्न आउँछन र आउन चाहन्छन । नेपालको अवस्थामा लाखौ रुपिया ऋण गरेर आउनु अनि त्यही गएर कमाएर ऋण तिर्छु भन्दा चहि अलि गार्हो नै हुन्छ तर असम्भव भने होइन । किनकी पहिलो कुरो यहाँ काम पाउन नै गार्हो भैसकेको छ, । 2018 मा मात्र करिब ९ लाख International Students अस्ट्रेलियामा भित्रिएका थिए । जसको सिधा प्रभाव यहाँ काममा पर्छ जसले गर्दा काम पाउन निकै कठिन हुन लागेको छ ।
यहाँ सामान्य रुपमा Students ले कमाउने भनेको हप्ताको $700 हो जसमा एक हप्ताको Room Rent नै $110-$140 सम्म हुन्छ Single Student को लागि । Travel गर्दा हप्ताको सामान्य $50-$60 सकिन्छ र Grocery मा लगभग $50-$70 सकिन्छ ।
अब बाकी रह्यो जम्मा लगभग $350 जुन महिनामा $1400 र वर्षको $16000 हुन्छ।
सस्तो कलेजमा आउनेको कलेज फी $7000 देखि $13000 हुन्छ सामान्य र महंगोमा आउनेको $25000 सम्म हुने गर्दछ । त्यसैगरी नेपालका कन्सल्टेन्सीले सकेसम्म सबैलाई काम मज्जाले पाइन्छ भन्दै कमिसन धेरै खानको लागि एकदमै महङ्गो युनिभर्सिटीहरुमा पठाउने गर्दछन् अनि हामी सोझा नेपालीहरु धेरै ठुला सपना सजाउदै Apply गर्छौ । अब आफै सोच्नुस तपाईले कमाएको त्यो पैसा बाट कलेज युनिभर्सिटीको फी तिर्ने कि घरबाट लगाएर आएको साहुको पैसा तिर्ने ? त्यसैले आउने नै हो भने सकेसम्म सस्तो कलेजहरुमा आउदा राम्रो हुन्छ । यहाँ आइसकेपछि काम पाइहालिन्छ भन्ने पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन, कसैले हप्ता दिन त कसैले 2-3 महिनासम्म पनि काम पाउदैनन । अनि त्यस्तो भएपछि मान्छे depression हुने अनि तनाब लिने गर्दछन । त्यसैले आउन भन्दा पहिला सबै कुरा बुझेर सोचबिचार गरेर मात्र आएको राम्रो हुन्छ ।
Consultancy बाट आउने कि आफै apply गर्ने ?
Apply त कन्सल्टेन्सिबाट नै गर्ने तर अलिक सस्तो कलेजमा apply गर्ने !
काम पाउन कति सजिलो छ ?
आजकल काम पाउन त्यति सजिलो चै छैन तर खोजेपछि पाइन्छ तर त्यसको लागि हिम्मत र धैर्यता चाहिन्छ ।
एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई कति Respect गर्छन् त्यहाँ ?
कोहि बिदेशी देखियो भने बरु हासेर hello भन्छन तर नेपाली लाई हेर्यो मात्र भने नि मुख कुच्चाएर हिड्छन । तर सबै त्यस्तै पनि हुदैनन कोहि कोहि बोल्ने अनि राम्रो व्यवहार गर्ने नि हुन्छन् ।
तर प्राय Resturant, अफिस खोलेर बसेका नेपालीहरुले नेपालीलाई नै एकदम हेप्ने गर्छन् । सुरुमा त नेपालीलाई काममा नै नलिने, काममा लिएपनि पैसा नदिने वा एकदमै थोरै दिने गर्छन् ।
एउटा कुरा यहाँ आएपछि तपाइँ हरेक समस्यासग जुध्न तयार हुनुपर्छ । किनकि अस्ट्रेलियामा तपाइँलाई समस्या पर्यो भने सहयोग गर्ने मान्छे चै पटक्कै पाइदैनन भन्दा हुन्छ । झन्डै एक बर्ष अगाडि मेरो एउटा साथीको अस्ट्रेलिया गएको थियो । उसले कहिलेकाहीं फोनमा मलाई गाह्रो छ यार, कसैले सहयोग गर्दैनन् भन्ने गर्थ्यो ।
अस्ट्रेलिया गएको ३-४ महिनामै ब्रेन ह्यामरेज भएर उसको मृत्यु भयो । यो भनेको दिमागमा एकदमै धेरै Pressure परेपछी दिमागको नसा फुटेर त्यही रगत जम्नु हो, यस्तो भएपछी मानिसको निकै छिटो ज्यान जान्छ । Hospital मा ल्याउन नपाउदै Death भयो र उसको Dead Body लाई नेपाल ल्याउन पैसा जुटाइयो । तर उ जिवित हुँदा नै त्यसरी सहयोग गरेको भए सायद उ अहिले यही दुनियामै हुन्थ्यो होला । तर यो कुरा बुझ्ने र समस्या सुन्ने फुर्सद यहाँ कसैलाई हुँदैन ।
(अस्ट्रेलियाका विद्यार्थीलाई पर्ने समस्याको बारेमा रवि लामिछाने सरको अष्ट्रेलियाको Episode पनि हेर्न सकिन्छ ।)
पैसा कमाउन सजिलो छ ? कति दिन्छन् Hourly ?
पैसा चहि $11 per hour देखि माथि कामको स्तर अनुसार हुन्छ । सामान्य 16-18 डलर हुन्छ तर Cash मा काम गर्दा जुन illegal हो र त्यसमा चाहिँ $18 देखि माथि हुन्छ ।
घुम्न कतिको पाइन्छ ?
घुम्न चहि Sunday गयो भने Sydney मा Bus, Train, Ferry, Light rail सबैमा Free हुन्छ र काम गर्न थालेपछि घुम्न जान मन लाग्दैन थकाइले गर्दा बरु सुत्छु जस्तो हुन्छ । घुम्नको लागि Beach हरु अनि धेरै राम्रो राम्रो ठाउँहरु छन ।
सोचेे जस्तो रमाइलो छ कि नाइँ ?
रमाइलो नै छ तर टाढा भएको घरपरिवार सम्झिदा दु:ख लाग्छ । कन्सल्टेन्सीले अस्ट्रेलियाको बारेमा राम्रो कुरा मात्र भनिदिन्छ्न, यहाँ बाच्न कति मिहिनेत गर्नुपर्छ भनेर चै भन्दैनन । अनि नेपाली विद्यार्थीहरु खुसी हुँदै ठूलो सपना लिएर यहाँ आउँछ्न् अनि यहाँ आएपछि बल्ल वास्तविकता थाहा पाउछन् ।
तर फेरि यहाँ दु:ख गरेपछि पैसा चै कमाइन्छ । पैसा भएपछि आफुले सोचेको कुराहरु पुरा गर्न सकिन्छ । $1500-$3000 सम्ममा ठिक्कको कार किन्न सकिन्छ, नेपालमा bike किन्ने पैसा नहुने तर यहा 2-3 हप्ता काम गरेको पैसा बचाएर कार किन्न सकिन्छ । राम्रो छ यहाँको Life दुख गर्न सक्नेलाई ।
English बोल्न नआउदा कतिको समस्या हुन्छ ?
धेरैजसो ठाउमा supervisor र contractor नेपाली अथवा इन्डियन, पाकिस्तानी हुन्छन् उनीहरुको कुरा मज्जाले बुझिन्छ । अनि Australian Accent चहि बुझ्न अलि गार्हो हुन्छ किनकी Australian हरु अलि छिटो बोल्छन् । तर 12 पास गरेर गएपछी त English मा समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
Dependent मा जाने भनेको कस्तो हो ?
Dependent भनेको चहि सामान्य रुपमा भन्दा Partner हो मतलब Husband or wife हो । यस्तो Visa चहि सुरुमै apply गरेर दुबै जना संगै जान नि मिल्छ र एक जना पहिला गएर केही महिना पछि आफ्नो Husband or Wife लाई लान पनि मिल्छ । Dependent भयो भने चहि Australia मा Economically, Mentally and Spiritually धेरै सहयोग हुन्छ ।
गएको कति बर्षमा PR पाइन्छ ?
यति नै वर्षमा PR हुन्छ भन्ने हुदैन, कसैको 7-8 वर्ष सम्म नि हुदैन भने कसैको 3-4 वर्षमै हुन्छ। त्यसको लागि यहा Bachelor or Master पुरा गरेर IELTS/PTE मा धेरै स्कोर ल्याएर अनी विभिन्न किसिमबाट Points पुरा गरेर मात्र पहिला TR(Temporary residence) अनी PR पाइन्छ तर भने जस्तो सजिलो भने छैन।
Female को लागि कतिको गाह्रो हुन्छ ?
Female लाई पनि त्यही हो, गार्हो नै छ तर केटीहरुले Waitress, Receptionist, Housekeeping जस्ता काम हरु छिटो पाउने गर्दछ्न ।
पछि म त्यहीँको Australian संग बिहे गर्छु अनि सधै Australia मा बस्छु भन्न पाउछु ?
एकदम मजाले पाउनुहुन्छ, किनकी तपाइको नि Citizenship हुन्छ ।
त्यहा PR पाएपछि नेपालको नागरिकता छोड्नुपर्छ ?
PR भनेको नि एक प्रकारको Visa नै हो, यो पाउँदा नेपालको नागरिकता छोड्नु पर्दैन, तर तपाइले Australia को Citizenship लिनि भो भने चहि छोड्नुपर्छ ।
नेपालमै मिहिनेत गरेर पढ्नु राम्रो कि अस्ट्रेलिया जानु राम्रो ?
साच्चै भन्नुपर्दा आमाले Bed मा खाना ल्याइदिने अनि चम्चाले खाना खाएर प्लेट पनि त्यहीँ छोड्ने विद्यार्थीलाई लागि निकै गाह्रो हुन सक्छ अस्ट्रेलिया ! यहाँ काममा आउने/जाने र Fees तिर्नेको मात्र Fixed schedule हुन्छ । खाने, सुत्ने, पढ्ने, रमाइलो गर्ने केहिको ठेगान नै हुँदैन । त्यसैले शारीरिक रुपमा स्वस्थ हुनुहुन्छ, लगातार मिहिनेत र परिश्रम गर्न सक्नुहुन्छ भने मात्र यहाँ आउनुहोला । होइन भने नेपालमै बसेर मिहिनेत गर्नुहोस्, किनकी यहाँ गर्ने मिहिनेतले तपाईं नेपालमा पढेर University Top गर्न सक्नुहुन्छ ।
Australia आउन चाहानेहरुलाई म के भन्न चाहन्छु भने यहाँ पढाइ, काम, पैसा, दु:ख सबै कुरा छ, सबै कुरालाई व्यवस्थित ढंगले लैजान सके मात्र सफलता प्राप्त हुन्छ । Australia ले मान्छे लाई धेरै कुरा सिकाउछ ! कसैको सहारा बिना एक्लै कसरी बाँच्ने, जीवन के हो ? दु:ख भनेको कस्तो हुदो रहेछ, भोक भोकै नसुती काम गर्दाको पीँडा कस्तो हुन्छ जस्ता धेरै life lesson सिकाउछ Australia ले । म त भन्छु हरेक नेपाली युवा युवती यहाँ आएर दुख बुझ्नुपर्छ, अनि यहाँको जीवनलाई बुझेर आफ्नो देश फर्किएर त्यो जोश जाँगरले केहि गरुन भन्ने चाहान्छु । Australia निकै राम्रो देश हो, यसले मानिसलाई मेहनती र लगनशील बन्न सिकाउछ ।
केही बर्ष अगाडि अस्ट्रेलिया जानुभएको एकजना दाइले फेसबुकमा यस्तो लेख्नुभएको थियो ।
नेपालमा हुदा कोही Network engineer, कोही IT Specialist, कोही Bank manager, कोही सरकारी Officer, कोही आर्मी को Major, कोही Police को SP, कोही Lecturer, कोही Nurse, कोही businessman, कोही करोडपति को छोरा, कोही जमिन्दार को छोरा, कोही काठमाडौँको साहुजी, कोइ जर्नेलको छोरा/छोरि कोही के कोइ के, कसैलाई छोई नसक्नु, यहाँ आए पछि हामी सबै एक..भाडा Driver…सब को अनुहारमा उही थकान.. उही पसिना को गन्ध….. समानता सिकायो अस्ट्रेलियाले ! जय अस्ट्रेलिया !
(यो सामाग्री अस्ट्रेलियामा रहेका विद्यार्थीसंगको कुराकानीमा आधारित रहेर तयार पारिएको हो, अस्ट्रेलियाको भित्री कुराको बारेमा सबै विद्यार्थीले बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने यो पोस्टलाई सेयर गरिदिनुहोला !)
CRedit for this article : Saugat
Article published by : Suyesh
How to earn money onlin in nepal. Click